संसारकै सुन्दरतम मानिने इरानी महिलाहरु ,यस्तो रहेछ सुन्दरताको राज - Naya Kantipur
Home रोचक संसारकै सुन्दरतम मानिने इरानी महिलाहरु ,यस्तो रहेछ सुन्दरताको राज
संसारकै सुन्दरतम मानिने इरानी महिलाहरु ,यस्तो रहेछ सुन्दरताको राज
भूगोल र समुदाय अनुसार सुन्दरताको मापन पनि भिन्न भिन्नै हुनसक्छ । कतै कालो छाला मन पराइन्छ भने, कतै गोरो । कतै पातलो ओंठलाई आकर्षक मानिन्छ, त कतै मोटो ओंठलाई । कसैले सलक्क केस रुचाउँछन् भने, कसैले कर्ली ।यद्यपी झट्ट हेर्दा हामी जस्तो सौन्दर्यबाट मोहित हुन्छौं, जसको आँखा, अनुहारको बान्की, शरीरको बनौटले उनीहरुतर्फ सबैको ध्यान खिच्दछ ।त्यस्तै इरान एक मुस्लिम बहुल देश हो । त्यहाँ महिलाको जीवन त्यती सहज छैन । यद्यपी सुन्दरताको कसीमा उनीहरुले विश्वका महिलाहरुलाई उछिन्छन् । कसरी ?
इरानी महिला किन सुन्दर हुन्छन् रु यसको जस वंशानुगत गुणलाई दिइन्छ । अर्थात वंशानुगत रुपमै उनीहरु सुन्दर एवं आकर्षक अनुहार लिएर जन्मन्छन् । जन्मजात उनीहरुले सुन्दर अनुहार पाउँछन् ।
इरानी महिला संसारभरकै सुन्दर मानिनुको कारण त्यहाँको भूगोल पनि हो भनिन्छ । वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्दा उनीहरु बाँचेको भूगोल र प्राकृतिकले यसमा खास भूमिका खेलेको छ । किनभने त्यहाँको मौसम छालाको सुन्दरताको लागि एकदमै अनुकुल छ ।
इरानी महिला आकर्षक हुनुमा उनीहरुको खानपानले पनि काम गरेको छ । भनिन्छ, उनीहरु खानपानमा ज्यादै सर्तक छन् । इरानी महिला आकर्षक हुनुमा उनीहरुको जन्मजात गुण त छँदैछ, त्यसमाथि उचित खानपान नै हो ।इरानी महिलाहरुले आफ्नो डाइटमा माछा र ओखर सामेल गर्छन् । उनीहरु मह पनि नियमित रुपले सेवन गर्छन् । ओखरमा भिटामिन इ पाइन्छ, जसले अनुहारमा चमक ल्याउँछ ।इरानी महिलाहरु विशेषगरी गहुँलाई पिनेर बनाइएको खाना ‘बल्गर’ खाने गर्दछन् । यसले अनुहारको छालाको चमकका साथै शरीरीक बनावटलाई नियन्त्रित गर्ने गर्दछन् ।
इरानी महिलाहरु धेरै भन्दा धेरै दही तथा पुदिनायुक्त पेय पदार्थ ‘शिनेना’को सेवन गर्दछन् । यसको सेवनले अनुहारको छाला तथा कपाललाई स्वस्थ राख्नुका साथै अनुहारमा चाउरीपना हुन दिदैन ।
इरानी महिला विशेषगरी, दही , तरकारी तथा मासुबाट बनेका सुपका सेवन अधिक मात्रामा गर्दछन् । यसले सौन्दर्य बढाउनुका साथै शरीरको तौल नियन्त्रित रहन्छ ।
इरानी महिलाहरुमा प्लाष्टिक सर्जरीको क्रेज बढ्दो क्रममा छ । प्लाष्टिक सर्जरीकै कारण पछिल्लो समय उनीहरु आर्कषक देखिन थालेका छन् । त्यससँगै उनीहरुमा कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग बढ्नाले पनि यसको असर उनीहरुको जीवनमा देखिन थालेको छ ।
साभारः २४ न्युज
Previous article३ सय दृश्य काटिएपछि ‘पद्मावत’ रिलिज हुने, यस्तो हुनेछ सेन्सरपछिको फिल्म
Next articleबैतडीमा अचम्मको गुफा भेटियो, ढुंगा फुटाउन खोज्नेको मुटु दुख्यो !
विश्वका ११ ठूला सहर जहाँ थोपाथोपा पानीका लागि तड्पिनेछन्
रोचक February 12, 2018
थुप्रै अवार्ड जितेका तर सय करोड कमाउने फिल्म दिन नसकेको यी...
रोचक February 1, 2018
अनमोल केसी भन्छन् ‘म बलिउड गएँ भने नेपाली फिल्म डुब्छ’ (भिडियो...
रोचक January 30, 2018